मार्केटप्लेस एकीकरण - Amazon, Ebay, Allegro र Etsy सँग ई-निर्यात प्रोपार्स गर्दछ
आदेश र फिर्ता व्यवस्थापन
ई वाणिज्य एकीकरण
ERP / लेखा एकीकरण
ई वाणिज्य प्लेटफार्महरु
यो नि: शुल्क प्रयास गर्नुहोस्
एक डेमो अनुरोध गर्नुहोस्
लगइन अब सुरु गर्नुहोस्!
हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस:0850 532 44 61
ग्लोबल मार्केटप्लेस एकीकरण
एक एकल प्यानलमा सँगै तपाइँको ई-वाणिज्य लेनदेन ल्याउनुहोस् र तिनीहरूलाई स्वचालित रूपमा व्यवस्थापन गर्नुहोस्!
५ देशहरुको बजार
फ्रान्स बजार (चाँडै)
जर्मनी बजार (चाँडै)
ग्लोबल (चाँडै आउँदैछ)
ERP / लेखा कार्यक्रम
ई वाणिज्य प्लेटफार्म
Propars के हो?
Propars एक व्यापार-सहुलियत कार्यक्रम हो कि कुनै पनी व्यापार कि ट्रेडहरु द्वारा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसले ब्यापारहरुलाई उनीहरुको बिभिन्न आवश्यकताहरुको लागी छुट्टाछुट्टै कार्यक्रमहरु को उपयोग बाट बचाउँछ, र ब्यापार समय र पैसा बचाउँछ। यसको धेरै सुविधाहरु जस्तै शेयर व्यवस्थापन, पूर्व लेखा व्यवस्थापन, अर्डर र ग्राहक प्रबंधन को लागी धन्यवाद, व्यवसायहरु एक छत मुनि आफ्नो सबै आवश्यकताहरु लाई पूरा गर्न सक्छन्।
Propars के विशेषताहरु छन्?
Propars सूची व्यवस्थापन, क्रय व्यवस्थापन, लेखा व्यवस्थापन, ई-वाणिज्य व्यवस्थापन, आदेश व्यवस्थापन, ग्राहक संचार प्रबन्धन सुविधाहरु छन्। यी मोड्युलहरु, जस मध्ये प्रत्येक एकदम व्यापक छन्, SMEs को आवश्यकताहरु संग लाइन मा डिजाइन गरीएको थियो।
ई-वाणिज्य प्रबन्धको अर्थ के हो?
ई वाणिज्य व्यवस्थापन; यसको मतलब यो हो कि तपाइँ टर्की मा ग्राहकहरु को लाखौं सम्म पुग्न र दुनिया भर मा तपाइँ तपाइँको ब्यापार मा बेच्ने उत्पादनहरु लाई इन्टरनेटमा ल्याएर। यदि तपाइँ संग Propars छ, संकोच नगर्नुहोस्, ई-वाणिज्य व्यवस्थापन Propars संग धेरै सजिलो छ! Propars आवश्यक प्रक्रियाहरु को अधिकांश automates र तपाइँ ई-वाणिज्य मा सफलता प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।
कुन ई-वाणिज्य च्यानलहरुमा मेरा उत्पादनहरु Propars संग बिक्री मा जानेछन्?
सबैभन्दा ठूलो डिजिटल बजार मा जहाँ N11, Gittigidiyor, Trendyol, Hepsiburada, EBay, Amazon र Etsy को रूप मा धेरै बिक्रेताहरु, Propars स्वचालित रूपमा एक क्लिक संग बिक्री मा उत्पादनहरु राख्छ।
म कसरी मेरो उत्पादनहरु Propars लाई हस्तान्तरण गर्नेछु?
आदेश मा तपाइँको उत्पादनहरु को लागी धेरै इन्टरनेट बजार मा बिक्री मा जाने को लागी, यो Propars लाई मात्र एक पटक स्थानान्तरण गर्न को लागी पर्याप्त छ। यस को लागी, उत्पादनहरु को एक सानो संख्या संग साना व्यवसायहरु सजीलै Propars को सूची व्यवस्थापन मोड्युल को उपयोग गरेर आफ्नो उत्पादनहरु प्रविष्ट गर्न सक्छन्। धेरै उत्पादनहरु संग व्यापार Propars उत्पादन जानकारी युक्त XML फाइलहरु अपलोड र केहि सेकेन्ड मा Propars उत्पादनहरु को हजारौं स्थानान्तरण गर्न सक्नुहुन्छ।
म कसरी Propars को उपयोग शुरू गर्छु?
तपाइँ प्रत्येक पृष्ठ को माथिल्लो दाहिने कुनामा 'नि: शुल्क को लागी प्रयास गर्नुहोस्' बटन क्लिक गरेर र खुल्ने फारम भरेर एक नि: शुल्क परीक्षण अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ। जब तपाइँको अनुरोध तपाइँ सम्म पुग्छ, एक Propars प्रतिनिधि तुरुन्तै तपाइँलाई फोन गर्नुहुनेछ र तपाइँ सित्तैमा Propars को उपयोग शुरू गर्नुहुनेछ।
मैले एउटा प्याक किनेको छु, के म यसलाई पछि परिवर्तन गर्न सक्छु?
हो, तपाइँ कुनै पनि समय प्याकेजहरु बीच स्विच गर्न सक्नुहुन्छ। तपाइँको व्यवसाय को बदलिदो आवश्यकताहरु संग राख्न को लागी, केवल Propars लाई कल गर्नुहोस्!
निर्णय गर्न सक्नुहुन्न?
हामीलाई तपाइँ निर्णय गर्न मद्दत गरौं।
हाम्रो प्याकेज को बारे मा हाम्रो ग्राहक प्रतिनिधि लाई कल गर्नुहोस्।
अब सुरू गर्नुहोस्
यदि तपाइँ इन्टरनेटमा तपाइँको पसलमा उत्पादनहरू बेच्नुहुन्छ भने, तपाइँ धेरै पैसा कमाउनुहुनेछ। हो। यो अहिले सबैलाई थाहा छ। ‘सपिङ मल खुल्यो, इन्टरनेट आयो, व्यापारी गायब’ भनी समयसँग तालमेल गर्न नसकेका पसल मालिकहरूले एकपछि अर्को गरी इन्टरनेटमा पाइला टेक्ने बाहेक अर्को विकल्प नभएको महसुस गर्न थाले। र वास्तवमा, इन्टरनेट र अनलाइन बिक्री तपाइँको मुक्तिदाता हो। तपाईहरु मध्ये कोही यो देखेर रिस उठ्नुहुन्छ र भन्न सक्नुहुन्छ, "यो कहाँबाट आयो, इन्टरनेटमा बेच्दै, ई-कमर्स, मलाई थाहा छैन ..."। तपाईलाई यो मनपर्छ वा होइन, e-commerce बाँच्न र वास्तवमा धेरै कमाउने एक मात्र तरिका हो। किन सोध्नुहुन्छ ? किनभने लाखौं ग्राहकहरू जो माइल टाढा छन्, जो तपाईंको पसलको ढोका अगाडि जान सक्दैनन्, हरेक दिन इन्टरनेट सर्फ गर्दैछन्। यदि तपाइँसँग इन्टरनेटमा पसल छ भने, लाखौं ग्राहकहरू जसले अब इन्टरनेट छोड्न सक्दैनन् स्मार्ट फोनहरूका कारण धेरै पटक इन्टरनेटमा तपाइँको पसलको ढोका वरिपरि हिंडिरहेका छन्। केही दिनमा, तपाईंले आफूलाई शिवास, अंकारा र यहाँका गाँउहरूमा पनि अर्डरहरू तयार गर्दै हुनुहुन्छ जहाँ कार्गो जाँदैन। प्रोपार्सको तथ्याङ्कअनुसार इ–कमर्समा संलग्न नहुने र औसत ५०० उत्पादन हुने स्टोरले इ–कमर्स सुरु गरेको ६ महिनामा आफ्नो कारोबार ३५ प्रतिशतले बढाउँछ । यसबाहेक, यो ज्ञात सबैभन्दा कम दर हो। त्यहाँ धेरै धेरै सफल छन्। धेरै जसो ई-कमर्स सुरु गर्ने कम्पनीहरूले 500-35 महिना भित्र दिनमा 1-2 अर्डरहरू प्राप्त गर्न थाल्छन् यदि तिनीहरूले गल्ती गरेनन् भने। * अनलाइन ग्राहकहरू तपाईंको स्टोरमा आउनेहरू भन्दा धेरै सकारात्मक छन्। तिनीहरूले तपाईंको अर्डर प्राप्त गर्दा तपाईंलाई उच्च स्कोर दिन्छ, जुन तपाईंले राम्रोसँग प्याक गर्नुहुन्छ र 10-15 दिनमा पठाउनुहुन्छ; तिनीहरूमध्ये धेरैले धेरै आशा गर्दैनन्; एक सानो छिटो र कोमल कार्य तिनीहरूलाई लागि पर्याप्त छ। ई-वाणिज्यको विरोध नगर्नुहोस्। आउनुहोस् र तपाईंको पसलमा उत्पादनहरू अनलाइन बेच्न सुरु गर्नुहोस्, तपाईंको कारोबार र नाफा बढाउनुहोस्।
खैर, इन्टरनेटमा उत्पादन के हो?के यो साँच्चै बेचेको छ?
इन्टरनेटमा उत्पादनहरू बेच्दै त्यहाँ दुई तरिकाहरू छन्:
वेबसाइट बनाउनुहोस् र त्यहाँबाट आफ्ना उत्पादनहरू बेच्नुहोस्,
N11.com, यो जाँदैछ, Hepsiburada.com पसल खोल्ने र उत्पादनहरू बेच्ने जस्ता साइटहरूको सदस्य बन्न।
आफैलाई एक साइट बनाउनुहोस् र उत्पादनहरू बेच्नुहोस्:
यदि तपाइँ भर्खरै ई-वाणिज्यमा सुरु गर्दै हुनुहुन्छ भने, यो तपाइँको लागि एक कठिन विधि हो। किनभने इन्टरनेटमा लाखौं साइटहरू छन्, जसको मतलब तपाईंसँग लाखौं प्रतिस्पर्धीहरू छन्। आज, यो वेबसाइट सेटअप गर्न र व्यवस्थापन गर्न, SEO अनुकूलन गर्न, Google जस्तै खोज साइटहरूमा उच्च श्रेणीकरण गर्न सजिलो छैन। यो महँगो पनि छ। यसले विज्ञापनको लागि बजेट विनियोजन र धेरै कम्पनी वा विशेषज्ञहरूलाई भुक्तान गर्न आवश्यक छ। किनभने यदि तपाईंको वेबसाइट मोबाइल-अनुकूल छैन, सुन्दर र सफल डिजाइन छैन, वा यदि Google मा उच्च श्रेणीमा छैन भने, दुर्भाग्यवश, यसले काम गर्दैन। ई-कमर्स सुरु गर्दा यस्तो लगानी र खर्च गर्नुको सट्टा, पहिले सजिलोसँग सुरु गर्नुहोस्। त्यसैले अर्को विकल्प। अवश्य पनि, तपाईंसँग तपाईंको लागि विशेष साइट हुनुपर्छ, हामी अहिले आधुनिक युगमा छौं। तर जब तपाइँ तपाइँको ई-वाणिज्य दोस्रो विकल्प संग सजिलै संग गर्नुहुन्छ र पैसा कमाउनुहुन्छ, तपाइँ समय संग तपाइँको साइट को हेरचाह गर्नुहुनेछ।
N11, Gittigidiyor जस्ता साइटहरूमा उत्पादनहरू बिक्री गर्दै:
यहाँ ई-वाणिज्य सुरु गर्न सजिलो र सस्तो तरिका हो। टर्कीमा चारवटा ठूला साइटहरू छन् जहाँ तपाईं उत्पादनहरू प्रविष्ट गर्न र बेच्न सक्नुहुन्छ। हामी तिनीहरूलाई हामी बीचका चार ठूलाहरू भन्छौं: •N11.com •Gittigidiyor.com •Hepsiburada.com •Sanalpazar.com यी मध्ये अधिकांश साइटहरूले तपाईंको लागि ठूलो बजेटको साथ इन्टरनेट र टेलिभिजनमा विज्ञापन गर्छन् र लाखौं ग्राहकहरूलाई आकर्षित गर्छन्। अर्को शब्दमा, लाखौं ग्राहकहरू हरेक दिन यी साइटहरू भ्रमण गर्छन्। तयार मा, सस्तोमा तिम्रो लागि कुरिरहेको छु। तपाईंले गर्नुपर्ने भनेको यी साइटहरूको सदस्य बन्नु र भर्चुअल पसल खोल्नु हो। यो अन्य विकल्पको तुलनामा एकदम सस्तो तरिका हो। तपाईंले बिक्री गर्दा तिनीहरूले तपाईंलाई कमिशन लिन्छन्, र केही पसल भाडा माग्छन्। तर संख्याहरू धेरै सभ्य छन्। मुख्य बिन्दुमा जाऔं। यी साइटहरूमा पसल खोलिसकेपछि, ई-कमर्सको क्लासिक कठिनाइहरू सुरु हुन्छन्। तपाइँ तपाइँको पसल मा प्रत्येक उत्पादन को लागी एक विज्ञापन पोस्ट गर्न आवश्यक छ; यदि तपाईंसँग सयौं उत्पादनहरू छन् भने जुन दिन लाग्न सक्छ। तपाईंले आफ्नो पसल वा सप्लायरमा स्टक नभएका उत्पादनहरू तुरुन्तै पहिचान गर्न र तिनीहरूलाई तुरुन्तै हटाउन आवश्यक छ। किनभने यदि तपाईंले आफूसँग नभएको उत्पादन हटाउनुहुन्न भने, र यदि त्यस उत्पादनको लागि अर्डर आउँछ भने, ग्राहकहरूले तपाईंको पसलको स्कोर तोड्नेछन् किनभने तपाईंले यसलाई तुरुन्तै पठाउन सक्नुहुन्न। यदि तपाईंसँग सयौं उत्पादनहरू छन् भने, तपाईंले यो बारम्बार अनुभव गर्नुहुनेछ, त्यसैले तपाईंको पसलको स्कोर धेरै घट्नेछ र पसल साइटद्वारा बन्द हुनेछ। यदि तपाईंले अन्य साइटहरूमा पसल खोल्नुभएको छ, जुन तपाईंले ई-कमर्सको फलदायी स्वादको आनन्द लिँदा निश्चित रूपमा खोल्नुहुनेछ, जब कुनै एक साइटमा बिक्री हुन्छ, तपाईंले सबै साइटहरू भ्रमण गर्नुपर्नेछ र स्टक रकम घटाउनुपर्नेछ। -1 द्वारा बेचेको उत्पादनको। अर्डर तयारीमा ध्यान केन्द्रित गर्नुको सट्टा यी सबै चीजहरू म्यानुअल रूपमा गर्न प्रयास गर्न दिन र घण्टा लाग्नेछ। तपाईले कम्प्यूटरमा घण्टा बिताउनुहुनेछ किनकि तपाईले आगमन ग्राहक सन्देशहरूमा छिटो प्रतिक्रिया दिन आवश्यक छ। र तपाईंले हजारौं अन्य विक्रेताहरू जस्तै धेरै क्लासिक ई-वाणिज्य समस्याहरू अनुभव गर्नुहुनेछ।
तर चिन्ता नगर्नुहोस्। किनभने एकीकरण त्यहाँ यस्तो कुरा छ।
मार्केटप्लेस एकीकरण भनेको के हो?
एकीकरण भनेको लगभग दुई काम गर्ने प्लेटफर्महरू जडान गर्नु हो। यहाँ काम गर्ने चीजहरू मध्ये एक Propars व्यापार व्यवस्थापन कार्यक्रम हो; अर्को N11 वा Gittigidiyor जस्तै साइटहरू मध्ये एक हो। प्रोपर्समा pAzar स्थान एकीकरण त्यहाँ छ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, Propars N11 हामीले उल्लेख गरेका मार्केटप्लेस साइटहरूसँग एकीकृत छ, जस्तै Gittigidiyor, अर्थात् यो आफैंमा जडित छ, अर्थात् यो जडान भएको काम गर्दछ। प्रोपर्स छ बजार एकीकरण यी साइटहरूमा जडान गरेर, यसले तपाइँको लागि सबै कडा परिश्रम गर्दछ। अनुरोध गर्नुहोस् बजार एकीकरण यसको अर्थ के हो: प्रोपार्सद्वारा एकीकृत र कार्य गर्दै! यदि तपाइँ प्रोपार्स प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, तपाइँ प्रारम्भमा तपाइँको उत्पादन सूची XML वा एक्सेल फाइलको मद्दतले प्रोपार्समा अपलोड गर्नुहुनेछ। तपाईंको उत्पादन सूचीमा नामहरू, स्टक कोडहरू, स्टक मात्राहरू, विस्तृत जानकारी र उत्पादनहरूको विवरणहरू पनि समावेश हुनेछन्। त्यसपछि, Propars ले सबै कडा परिश्रमहरू स्वचालित रूपमा गर्नेछ र यी सबै साइटहरूमा खोल्ने र बन्द गर्ने विज्ञापनहरू, स्टक अपडेट गर्न र अन्य धेरैका लागि तपाईंले अपलोड गर्नुभएको उत्पादन जानकारी प्रयोग गर्नेछ, र तपाईंले काम गर्नुपर्दैन।
XML के हो? XML एउटा प्रकारको फाईल हो जुन एक्सेल फाइल जस्तो देखिन्छ जुन हामीलाई थाहा छ, तर इन्टरनेटमा भण्डार गरिएको छ, कम्प्युटरमा होइन। सामान्यतया, तपाईंका आपूर्तिकर्ताहरूसँग XML हुनेछ। प्रोपार्स प्रयोग गर्दा, तपाईंसँग भएका उत्पादनहरूका लागि तपाईंका आपूर्तिकर्ताहरूबाट XML अनुरोध गर्न र यसलाई Propars मा अपलोड गर्नु पर्याप्त हुन्छ। यदि तपाइँसँग XML छैन भने, तपाइँ उत्पादन जानकारीको साथ एक्सेल फाइल पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यस तरिकाले, तपाइँको उत्पादन जानकारी एकैचोटि बल्क मा Propars मा अपलोड गरिन्छ। यदि तपाइँसँग उत्पादनहरूको ठूलो संख्या छैन भने, तपाइँ सुरु गर्नु अघि तपाइँ तपाइँको उत्पादनहरू प्रोपर्समा एक एक गरेर दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ।
Propars टर्की को मात्र र संसारको अग्रणी ई-निर्यात समाधान हो। यो अमेजन, EBay, Etsy र Payooner को सेवा प्रदायक साझेदार हो। यो KOSGEB र Türk Telekom द्वारा समर्थित छ।
© २०२० Propars। सबै अधिकार सुरक्षित।
तपाइँको ई-वाणिज्य साइट
ई-इनभ्वाइस र ई-संग्रह
सम्झौता र नीतिहरू